Muqdisho: Faahfaahinta Qarax xoogan oo lala beegsaday xarummo dawladdu leedahay iyo al-shabaab oo sheegatay | Berberanews.com
Home WARARKA Dibadda Muqdisho: Faahfaahinta Qarax xoogan oo lala beegsaday xarummo dawladdu leedahay iyo al-shabaab...
Muqdisho: Faahfaahinta Qarax xoogan oo lala beegsaday xarummo dawladdu leedahay iyo al-shabaab oo sheegatay
Muqdisho(Berberanews)- Qarax xoog badan oo ka dhacay xaruntii hore ee Harkaha iyo Saamaha ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku yaaliin inta badan Wasaarado iyo Xarumo Badan Oo ah xafiisyada Dowlada KMG Soomaaliya. Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in Xiliga Uu Qaraxaasi
dhacay ay Xaruntaasi ka socdeen Shirar ay ku jireen dhamaan shaqaalihii Wasaaradaha dowlada ee ku yaalay halkaa iyo Xunbno wasiiro ah.Waxa sii kordhaya khasaaraha lixaadka leh ee ka dhashay weerarkii Ismaadimanta ahaa ee maanta duhurkii ka dhacay goobtaa oo ahayd dhismihii Harkaha iyo Saamaha ee magaalada Muqdisho oo ay hadda degan yihiin ilaa 8 wasaaradood, kuwaas oo ku yaallay agagaarka KM4, wararka goor danbe soo baxay ayaa sheegaya in goobta la beegsaday qaraxa ay ku sugnaayeen ku dhawaad waxkabadan 100 sarkaal oo ku jiray tababarro dhinaca nabadsugida ah, kuwaas oo loo qorsheeyay in dibadda loogu qaado.
sidoo kale Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa xooggiisa uu gaadhay saraakiishaa iyo goobtii ay ku jireen, halkaas oo ay xarumaha wasaaradaha qaarkood ku jireen wasiiro, xildhibaano, shaqaale ka hawlgala wasaaradahaa iyo arday goobta u timi inay ogaadaan natiijada Imtixaan laga qaaday, kuwaas oo loo diyaarinayay waxbarasho debeda ah. Qaar masuuliyiinta ku jiray xarumahaa ayaa la sheegay inay laba ka mid ah oo wasiiro ah dhaawacyo kala duwani soo gaadheen. Sidoo kale Ardayda ku sugnayd goobtaa ayaa ka mid ah dhimashada iyo dhawaacaba.
Sarkaal u hadlay nabadsugida Somalia ayaa sheegay inay hayaan mid ka mid ah dadkii qaraxaa fuliyay maydkiisa oo ay heleen Baasaboor Kenyan ah oo uu sitay, isagoo ku sheegay tirada dadka qaraxa sameeyay sadex qof oo watay gaadhi weyn oo gudaha u galay dhismahaa.
Dhaawaca iyo dhimashada ayaa gaadhaya ilaa 200 qof, kuwaas wararka qaar sheegayaan in dhimashada ilaa hada tirada la hayaa gaadhay ku dhowaad 60 qof, iyadoo tiro boqol iyo dheeraad ah la geeyay cusbitaalada. Maamulka Cusbitaalka Banaadir Dr. C/qaadir C/raxmaan Aadan oo gurmad sameeyay markii qaraxu dhacay ayaa sheegay in Dhaawaca iyo maydku ay badnaayeen, balse ay iyagu halkaa kasoo qaadeen 21 qof oo dhintay oo ay hilibkooda isu ururiyeen 57 qof oo dhaawaca ayaanu keenay Cusbitaalka Banaadir 21 qof.
Sidoo kale Cusbitaalka Madiina oo ka mid ah meelaha la geeyay dhaawac iyo dhimashada ayaa la geeyay 90 qof oo dhaawac kala duwani soo gaadhay , isla markaana 4 qof oo dhintay la geeyay cusbitaalka Madiina, balse Duniyo Cali Maxamed oo ka mid ah hawlwadeenada cusbitaalka madiina ayaa sheegtay in dadka halkaa ku dhintay qaarkood ay maydadkooda qaateen dad ehelkooda ahaa markii ay garteen, isla markaana ay jiraan dad goobta ka fogaa oo dhaawacyo soo gaadheen. Sidaa awgeed aan tirada dhabta ah ee khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca la ogaan karin.
Dhinaca kale Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Warfaafinta ee Al-Shabaab wax yar ka dib qaraxaa ayaa lagu sheegay in howlgalka ay ku beegsadeen dhismahaasi iyo shaqsiyaadkii ku jiray, waxaana lagu sheegay warsaxaafadeedka in saraakiisha tababarka loo qaadayay ay ahaayeen qeyb ka mid ah bartilmaameedka howlgalka waxa ay ugu yeedheen Istishhaadiga.
Warar kale oo madax banaan ayaa sheegaya in saraakiisha tababarka loo qaadayay ay ahaayeen dufcadii labaad oo loo qorshaynayay nabad sugidda, kuwaas oo dibadda loogu qaadi lahaa DKMG ah.
Howlgalkan qaraxaa ee Al-shabaab ayaa kusoo beegmay, maalin ka dib markii maamulka taagta daran ee Shariif Sh Axmed ay sheegeen inay ka guulaysteen kooxda Al-shabaab, isla markaana uu shalay booqday madaxweyne Shariif Degmooyin ka tirsan Magaalada Muqdisho oo ka mid ah meelaha ay Al-shabaab ka baxeen dhowaan.
Previous articleXukuumadda Somaliland oo ku dhawaaqday inay awood kaga saari doonto dadka ajaanibka ah ee ka dhego-adaygay mudadii loo qabtay inay dalka ka baxaan
Next articleDhegayso: Qaar ka mid ah haweenka ka qaybgalay shirka Deegaanka Dubur oo dareenkooda ka dhiibanaya sidii uu shirkaasi u dhacay
Qoysas isku heystay nin ku lumay dagaalkii 77 oo uu kala saaray sheybaarka Puntland
“Ciidaamada waxaan leeyahay masuuliyad culus baa idin saaran” Xildh. Qabile
Qaramada Midoobay oo ka hadashay ahmiyada xidhiidha Somaliland iyo Taiwan
Qoysas isku heystay nin ku lumay dagaalkii 77 oo uu kala...
Taiwan oo laba milyan ku bixinaysa doorashada Somaliland
Nuxurka Kasoo Baxay Kulanka Rooble Iyo Wakiillada Beesha Caalamka Dhexmaray
Puntland oo shuruudo adag hordhigtay ka qaybgalka shirka doorashada
Dhul go’ay oo soo saaray maydadka boqollaal qof
Xildhibaan ku baaqay in la maxkamadeeyo Taliyaha Ciidanka Qaranka Somaliland
Caddeymo la’aan Eedaha Mucaaradka & Dadka qaar ee Booliiska, FITNO ayey...
Maraykanka oo ku baaqay ilaalinta tallooyinkii Guddida Baydhabo Doorashada Somalia
Maxkamadda sare ee Maraykanka oo amarro duldhigtay Trump
Taliska Booliska Somaliland oo ka hadlay tacadi loo geystay suxufiyad Hoodo...
“Bannaan bax kasta oo la dhigaa waa sharci darro” wasiirka Amniga...
Wasiirka Arrimaha Debedda Somalia oo laga helay COVID-19
Maxaa kaaga baxay khudbaddii Madaxweyne Deni ?